10 Atụmatụ Iji Zọpụta ego mgbe ejegharị | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Atụmatụ Iji Zọpụta ego mgbe ejegharị
10 Atụmatụ Iji Zọpụta ego mgbe ejegharị
Onye na-adịghị amasị zọpụta ego mgbe o kwere omume? ejegharị nwere ike ịbụ oké ọnụ, ma site ịzụ ụgbọ oloko gị tiketi na Save A Train na na-eme atụmatụ na anyị enyemaka, i nwere ike mee ka ala na-eri. Zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị na ndị a 10 Atụmatụ na gị ọzọ ezumike na gị obere akpa a ga-ekele gị.
NDỤMỌDỤ 1: Book A ụlọ na friji na Microwave Ma ọ bụ Kitchen Area
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ọ gaghị amasị esi nri mgbe on ezumike, na-eri nanị otu ugboro nri n'ụbọchị na 'home' pụrụ ịzọpụta gị a ịwụ. Ntak enwe a iko kọfị na-anọ a ọhụrụ ebe enweghị crazy ụlọ ọrụ ego? Kama eri-in maka nri ụtụtụ na ehihie na mgbe splurge na a fancy nri abalị. A ngwa ndakwa nri na ngwa nju oyi ga-enye aka n'ihi na reheating rifọrọ erifọ!
NDỤMỌDỤ 2: Tupu Ị Book, Nwee Aware Of The Location Of Ebe Ị na-anọ
Transportation nwere ike tinye ngwa ngwa, i nwere ike chọọ ịnọgide na a Central ebe. ntinye akwụkwọ a ebe ahụ bụ n'ebe dị anya nwere ike iyi ọnụ ala karịa ma ị ga-n'ụzọ nkịtị na-akwụ maka ya mgbe e mesịrị. kwesịrị, akwụkwọ ebe i nwere ike na-eje ije n'ebe nile si. Ọ bụghị naanị na ị ga-esi na-ahụ ndị ọzọ nke obodo na na, ma ị na- zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị.
NDỤMỌDỤ 3: Lee N'ihi City Tourism Cards Iji Save Money ezie ejegharị
Dabere na kaadị, ị pụrụ inweta free ntinye n'elu esenowo nkiri, discounts na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa, ikwu-na-na akara nhọrọ na-arụsi ọrụ ike nkiri, free njem ọha na eze, na ọbụna free guidebooks. Dabere na gị njegasi, ọ pụrụ ịbụ ruru ego.
NDỤMỌDỤ 4: Ekwela Nweta The Best Room
Olee otú oge ị na-n'ezie na-aga na-eji n'ime gị ụlọ? Ga nnọọ na ị ga-arahụ ụra n'ebe a? Ị mkpa a ụlọ na a ezi echiche ma ọ bụ nke ukwuu mmezi ohere? Ị ga-eji na-eji enyere ndụ aka, dị ka a na ọdọ mmiri ma ọ bụ a mma ụlọ? Ka-eme ihe n'eziokwu, ezumike adighi adi nma! Ya mere akwụkwọ gị ụlọ smart na-azọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị.
NDỤMỌDỤ 5: Iwepụtakwu oge na-ole na ole ebe na ị ga-azọpụta ego mgbe ejegharị
Anyị hụrụ n'anya ngwa ngwa njem. n'ezie, n'ụzọ ziri ezi karị ... anyị hụrụ n'anya uru njem. Kama ọduọ site n'otu nsọtụ a mba ọzọ, ma ọ bụ ewute site 6 mba na 6 izu, ga-esi mara region ị na-na, ọma. Inweta a ụgbọ okporo ígwè bụ ụzọ kasị mma ime nke a, dị ka i nwere oge na-na niile na saịtị na Mpaghara dị ka ị na-aga site na. E wezụga ọṅụ nke na-ewere ya mfe, mbido ọtụtụ flights, ụgbọ ala njem, na ịnya ụgbọ anya pụrụ n'ezie eri gị ego. Ya mere akwụsịlata, ewe ihe na, and discover all the cool free stuff.
NDỤMỌDỤ 6: Soro On Social Media
Zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị site "Ekwughị" ọkacha mmasị gị njem na saịtị na Facebook ma "soro" ha na Twitter. Ọ na-ahụkarị maka njem ụlọ ọrụ nyak na-ekpo ọkụ amụọ kpọmkwem site na ha na-elekọta mmadụ media ọwa.
NDỤMỌDỤ 7: Akwụkwọ Akụkọ-emekọ
Ina tụrụ ụtụ a ole na ole akwụkwọ akụkọ na-emepụta a ndepụta nke ugbu a amụọ dị na net maka ọ bụla e nyere oge. Ebe a na-anyị ugbu a nhọrọ maka akwụkwọ akụkọ zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị:
Travel Zoo - Idenye aha-enwe kwa izu FREE ala nke ha Top 20 amụọ - mbipụta maka mba dị iche iche.
Kenye Base - Debanye maka mgbasa ozi n'efu ha. Ha nwere amụọ na unadvertised ahịa na-enye gị ga-agaghị achọta ọ bụla ọzọ.
Basel na Geneva Ụgbọ oloko
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo St Moritz train
NDỤMỌDỤ 8: Dọwa An Ulo
Lọ ndị BOMB maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị na-achọ mmezi ndụ ohere na a kichin otú i nwere ike ịzọpụta na nri. Airbnb bụ a good way to get low-cost vacation rentals and sublets from locals in 180 mba.
Paris na Reims Ụgbọ oloko
Paris ka Nancy Ụgbọ oloko
Metz na Paris Ụgbọ oloko
Nancy na Paris Ụgbọ oloko
NDỤMỌDỤ 9: Travel Na Low Season
Ọ bụrụ na ị nwere okomoko nke inwe ike zere elu oge njem, jidere ya! Ahịa na-awụlikwa elu elu nke ukwu n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ. Na ọ bụghị ihe dị na n'oge okpomọkụ ị kwesịrị izere - echefula na Easter, Christmas na abụọ na ọkara-okwu ememe nwekwara ike ịbụ ndị ọzọ oké ọnụ. Ejegharị ejegharị nke oge ga-apụta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè na obere ọrụ n'aka na ebe - a mmeri-mmeri ọnọdụ ịzọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị!
Ọdụ ụgbọ elu nke Lyon ruo Provence train
ikpeazụ: Chọpụta Free Wi-Fi Iji Zọpụta ego mgbe ejegharị
Chọta free Wi-Fi Na ọbá akwụkwọ na cafes, ka ị ghara hama gị data. Na ọ bụrụ na ị na-na na akpọtụrụ gị home ịchọpụta ma ọ bụrụ na ọ ka na-mmiri na-ezo na e nwere, echefula iji free ọrụ ndị dị ka Skype ma ọ bụ Google!
Anyị Nyere Save Money ezie ejegharị?
Ka anyị mara ma ọ bụrụ na anyị nyeere gị aka zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị na ndị a 10 Atụmatụ. Anyị ga-amasị mara! Ma ugbu a, nleta Save A Train na nke kacha mma Mkpughe kwuru na gbaa ụgbọ okporo ígwè. Ọ dịghị Zoro Ezo ụgwọ, nweghị nsogbu oge! Dị nnọọ Train Travel!
Ị dị njikere na ndị a 10 Atụmatụ zọpụta ego mgbe ejegharị ejegharị? Book gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a ka onwe gị-ekpochapụ unu site mma nke njem!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Atụmatụ Iji Zọpụta ego mgbe ejegharị” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-save-money-traveling%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
mmefu ego europetravel moneysavingtips savemoney ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ traveltips